किन हुन्छ यौनप्रति मानिसको आकर्षण ? कसरी बन्छ आनन्दको स्रोत यौन क्रिडा ? onlinedarpan.com
Wednesday 20th of October 2021 / 12:12:38 AM
उनले मानवीय यौनबारे जति राम्रो व्याख्या सायद आजसम्म अरुले गर्नै सकेका छन् । यौन चिनाउनेदेखि विभिन्न आसनहरुमा फरक फरक तरिकाले कसरी यौन क्रिडा गर्न सकिन्छ भन्नेबारे उनले नै व्यवस्थित तरिकाले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यौन वास्तवमा संसारमा सबै भन्दा धेरै आकर्षणको विषय हो । र धेरै नै रहस्यमय पनि र गोप्य पनि यौन र मानिसमा रहने यौनिकता नै हुन्छ । मानिस त्यसैले होला यौनसम्पर्कका लागि बढी नै आसक्त हुन्छ ।
त्यो कुन तत्व छ जसले मानिसलाई बढी यौनी बनाउँछ ? त्यो यौनिकता ।
यौन आकर्षणबारे मानिसमा फरक फरक दृष्टिकोण हुन सक्तछ । तर पनि सबै किसिमका यौन आकर्षणका शैलीहरुको केन्द्रीय पक्ष भनेको यौनसम्पर्क नै हुने गरेको यौन मनोवैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
यौनसम्पर्क नै संसारको सधैभरी सबैलाई सबै भन्दा आनन्द प्राप्त गर्ने एउटा अद्भूत क्रिया हो । तर सदुपयोगको हदभन्दा बढी हुँदा त्यसले मानिसलाई मानिस नबनाएर दानव पनि बनाएको त हामीलाई थाहै नहोला भन्न सकिन्न ।
यौन प्राकृतिक पनि
मानवलाई मात्र नभएर प्राणी जगत्का हरेक जीवका लागि यो आनन्दमय हुन्छ । र, यो प्राकृतिक र सन्तान उत्पादन गरी वंश निरन्तरताका लागि पनि अपरिहार्य पक्ष हो । सन्तान बृद्धिका लागि प्रकृतिले नै त्यस्तै गरी जीव जगतलाई सृटि गरिदिएको हुन्छ ।
मानव जीवनका प्राथमिक आवश्यकता खानु, पिउनु, निदाउनु जत्तिकै महत्वपूर्ण कार्यभित्र यौन तथा प्रजनन व्यवहार पनि पर्दछ । खाना खानु भनेको बाँच्नका लागि हो ।
यौनको उद्देश्य आनन्द
प्राणीको लागि खानुको उद्देश्य मिठो (स्वाद) र आत्मा सन्तुष्टि पनि हो भने जस्तै यौन सम्पर्क पनि मानिसको सवालमा भने सन्तान उत्पादनका लागि नै भनेर सधै गरिने होइन धेरैको लागि त आनन्द र आत्मा सन्तुष्टि नै हो । किनकि प्रकृतिले चरम आनन्द आवस भनेर यौनाङ्गहरुलाई विशेष तन्तुहरुले बनाइ दिएको हुन्छ ।
सम्मानजनक र मर्यादित हुनु पर्छ यौन
कसैलाई करकाप वा यौन शोषणको रुपमा नभई, जवाफदेही र सुरक्षित यौनसम्पर्क नै वैज्ञानिक यौन सम्पर्कका पहिला आधार हुन् । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा यौन जोडी दुबै जना मानसिक रुपमा तयारी र मञ्जुर हुनु आवश्यक छ । यस्तो हुने अवस्थामा यौन सम्पर्क सन्तान उत्पादनका लागि मात्रै गरिदैन ।
आनन्द मात्र नभई शारीरिक र मानिसिक स्वास्थ्यका लागि पनि आनन्द प्राप्ति त छँदैछ । त्यसबाहेक तनावग्रस्त मानिसको मानसिक अवस्थाको उपचार पनि हो यौन । सही तरिकाले गरिएको यौन मानसिक स्वास्थ्यका साथै यसले शारीरिक स्वास्थ्यको समेत कारक बन्छ ।
मर्यादित र सुरक्षित यौन सम्पर्कले सबै भन्दा मुख्या कुरा त तनाव कम गराउँने कुरामा सबै विज्ञहरुको एक मत पाइन्छ । यसका अलावा यौन स्वास्थ्य विज्ञानमा यौन सम्पर्कका केही विशेष फाइदाहरु निम्न अनुसारका भएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ—
हप्तामा कमसेकम एक–दुइपटक यौन सम्पर्क राख्ने व्यक्तिमा शरीरको प्रतिरक्षी तत्व इम्युनोग्लोबुलिनको मात्रा बढाइ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
यौन सम्पर्क गर्दा शारीरीक तथा मानसिक कार्य हुने हुँदा यसले शरीरको तौल कम गर्न पनि मद्दत गरिहेको हुन्छ ।
३० मिनेटको यौनक्रियाले ८५ क्यालोरी वा सो भन्दा बढि क्यालोरी जलाउँछ ।
अक्सिटोसिन हर्मोनको प्रभावले टाउको दुखाइ, हाडजोर्नीको दुखाइ, महिनावारीसँग सम्बन्धित समस्याहरु पनि कम गर्दछ । अध्ययनले प्रोस्टेट ग्रन्थीको क्यान्सर र वीर्य स्खलनको सम्बन्ध देखाएको छ ।
धेरै पटकको वीर्य स्खलनले पुरुषहरूमा हुने प्रोस्टेट ग्रन्थीको क्यान्सर हुने सम्भावना कम गर्छ ।
यौन सम्पर्कले महिलाको पेल्भिक मांशपेशीहरुलाइ पनि बलियो बनाउँदछ । यौन सम्पर्कले मानिसमा राम्रो निद्रा पर्छ जसले गर्दा शरीर स्वस्थ र स्फूर्त रहन्छ ।